अहिले प्रेमतिर ध्यान छैन– गायिका मेचु | Ratopati
personकुवेर गिरी exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख ६, २०७६ chat_bubble_outline0
मिचु धिमाल पछिल्लो समय उदाएकी गायिका हुन् । ०६८ मा फिल्म ‘भूमिरक्षक’को एक गीतमार्फत गायनयात्रा थालनी गरेकी धिमालले अहिलेसम्म करिब तीन दर्जन हाराहारीको गीतमा स्वर भरेकी छन् । लगातार ४ वर्ष डोरेपी सङ्गीत पाठसालाबाट सङ्गीतको प्रशिक्षण लिएकी उनले ‘मिचु’ नामक एक सोलो एल्बमसमेत बजारमा ल्याएकी छन् ।
केही दिन पहिले समेत ‘मायाको मौसम’ बोलको नयाँ गीतसमेत बजारमा ल्याएकी उनको पछिल्लो समय निर्माण भएको धेरै फिल्ममा ब्याकग्राउन्ड आवाज दिएकी छन् । मोरङकी स्थायी बासिन्दा उनी गायनमा भविष्य बनाउन होमिएकी हुन् । उनको रहरको पेसा भने मोडलिङ हो । त्यसैले उनले केही म्युजिक भिडियोमा मोडलिङसमेत गरेकी छन् । यिनै गायिकासँग रातोपाटीको दस प्रश्न ।
किन रोज्नुभयो गायन ?
– मेरो सानैदेखि लेखन विधामा रुचि थियो । सानोमा लेख्नुको अलवा आफ्ना भाषाका गीतहरु कम्पोज गर्थें । एक दुई गरेर गर्दै जाँदा सिक्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्यो । काठमाडौँ आएपछि सङ्गीत सिक्दै गाउन थालँे । यो क्षेत्रबाट भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने लागेर होमिएँ ।
गायिका बन्न कति सजिलो रहेछ ?
–गायनमा मात्र होइन जुनै क्षेत्रमा पनि सुरुमा गाह्रो हुन्छ । निरन्तरता दिँदै गएपछि सफलता मिल्छ । सुरुवातको समय मलाई पनि गायन निकै कठिन अनुभव भएको थियो । तर निरन्तरता दिँदै जाँदा सहज महसुस भएको छ । छिट्टै स्थापित पनि हुन्छु होला ।
मोडलिङ पनि गर्नुभएको छ नि ?
–आफ्नै दुई गीतमा मोडलिङ गरेकी हुँ । पछिल्लो समय गायिका नामले मात्र चिनिएर पुग्दैन । अनुहारले पनि चिनिनुपर्दो रहेछ भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ । आफूलाई चिनाउनका लागि मोडलिङ पनि थालेकी हुँ । अर्काे कुरा आफूले फिल गरेर गायको गीतमा आफैले मोडलिङ गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि लाग्यो ।
दैनिक रियाज ?
– बिहान सधैँ आधा घण्टा गर्ने गरेको छु । साँझमा भने त्योभन्दा बढी गर्छु । गायनमा होमिएकाका लागि रियाज अनिवार्य छ ।
– खासै रुचि छैनभन्दा पनि हुन्छ । महिला भएपछि नर्मल मेकअप त गर्नु नै पर्छ । म प्रायः सन् ब्लक क्रिम, गाजल र लिपस्टिक नियमित लगाउँछु ।
– नियमित योगा गर्छु । डान्स गर्छु । पहिलाको त म कराँते खेलाडी पनि हुँ ।
–म पारिवारिक माहोलमा रमाउने फ्यामिलियर केटी हुँ । सानैदेखि नै व्यावहारिक पनि छु ।
दालभात र गुन्द्रुकको तरकारी धेरै मनपर्छ ।
– छैन, छैन । अहिले मेरो ध्यान प्रेमतिर छैन । अफर त आउने गरेका छन् । तर पहिलो प्रथामिकता करियरलाई दिएको हुनाले प्रेमतिर सोचेकी छैन ।
ड्रिम ब्वाइ ?
–हेर्दा राम्रो र आकर्षक हुनै पर्यो । त्यसको अलवा मेरो गायन फिल्ड बुझ्ने । कामका लागि चाहिने जति फ्री छोड्ने र धेरै माया गर्ने । व्यावहारिक र आफूभन्दा ४, ५ वर्षले जेठो नै चाहिन्छ । अनिमा कुरा मिल्छ ।